Cavi-sculpt – Novu
An alternative to surgery in body slimming/shaping and especially for skin tightening, this body treatment uses ultrasound energy to destroy fat cells in specific parts of the body.
CONSISTENCY — Smoothens out stretch marks through collagen stimulation
CONTOUR — Destroys fat cells and tightens the skin foramore contoured body shape
It uses ultrasound cavitation,aslimming and skin tightening technique that uses machines to direct high energy ultrasound waves into the skin. As soon as the waves hit the body, it creates microbubbles comprised of vapour. These bubbles are found within the fatty tissues, and its interstitial liquid is referred to as the “cavitation effect”. The interstitial fluid will evolve resulting it to expand, contract and collapse to release water and fat into the body tissues. This is then absorbed by the liver as either waste products and processed out of the body or broken down and consumed as energy. Since it is using ultrasound technology with greater depth of penetration, more collagen is produced, which results inatightening effect.
Maintenance Phase: Every two weeks to onceamonth
ကိုယ်ခန္ဓာသွယ်လျစေခြင်း/ ပုံသွင်းခြင်းနှင့် အထူးသဖြင့် အရေပြားတင်းရင်းစေခြင်းအတွက် ခွဲစိတ်မှုမဟုတ်သည့် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိုယ်ခန္ဓာကုထုံးသည် ultrasoundစွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများရှိ အဆီဆဲလ်များကို ဖျက်စီးပေးသည်။
အသားအရေညီညာမှု-ကိုလာဂျင်လှုံ့ဆော်မှုဖြင့် အကြောပြတ်ရာများကို လျော့နည်းညီညာစေသည်။
ပေါ်လွင်စေမှု- အဆီဆဲလ်များကို ဖျက်ဆီးပြီး အရေပြားကိုတင်းရင်းစေခြင်းဖြင့် ပိုမိုပေါ်လွင်သော ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကို ပိုင်ဆိုင်စေသည်။
စက်များကိုအသုံးပြု၍ အရေပြားအတွင်းသို့ စွမ်းအားပြင်း ultrasound လှိုင်းများကိုသက်ရောက်စေကာ ကိုယ်ခန္ဓာသွယ်လျပြီး အရေပြားတင်းရင်းစေသော နည်းစနစ်ဖြစ်သည်။ လှိုင်းများသည် ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိသည်နှင့် အလွန်တရာသေးငယ်သော အငွေ့ပူပေါင်းကလေးများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤပူပေါင်းများသည် အဆီတစ်ရှူးများအတွင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်ပြီး ၎င်း၏ကြားခံအရည်ကို “လှိုဏ်ပေါက် အာနိသင်” ဟုခေါ်သည်။ ကြားခံအရည်၏ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ပူပေါင်းများသည် ကျုံ့လိုက်ဆန့်လိုက်ဖြစ်ကာ နောက်ဆုံးတွင်ပေါက်ထွက်သွားပြီး ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ရှူးများအတွင်းသို့ ရေနှင့်အဆီများရောက်ရှိစေသည်။ ထိုအချိန်တွင် အသည်းမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအဖြစ်စုပ်ယူကာ ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပသို့ စွန့်ထုတ်ခြင်းခံရသည် မဟုတ်ပါက ဖြိုခွဲခံရပြီး စွမ်းအင်အဖြစ်အသုံးပြုခံရသည်။ ဤကုထုံးတွင် ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာထိုးဖောက်နိုင်သောultrasoundနည်းပညာကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် ကိုလာဂျင်များပိုမိုထွက်ရှိစေကာ အရေပြားတင်းရင်းစေသော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိစေသည်။
Cellulite နှင့် အကြောပြတ်ရာများလျော့နည်းစေခြင်း